Nataon’ny sehatra tsy miankina : vita ny boky momba ny lalàn’ny fifamoivoizana | NewsMada
Nataon’ny sehatra tsy miankina : vita ny boky momba ny lalàn’ny fifamoivoizana
Nahavita boky momba ny lalàn’ny fifamoivoizana ny sehatra tsy miankina ahitana ny Sodirex- Citroën sy ny Vivo energy Shell Madagascar. Hita ao anatiny avokoa ny fitondrana fiara sy moto, fahazoan-dalana mitondra fiara, ireo loza samihafa, fandraràna, ireo tsara ho fantatry ny mpandeha an-tongotra. Niarahana amin’ny federasion’ny moto sy ny federasion’ny fanamoriana fiarakodia ny famolavolana ny boky satria samy mifamoivoy eny amin’ny lalana avokoa ireo, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny tetikasa, Gabriel Harson, omaly teny Ankorondrano.
Ny taona 2015, olona iray isaky ny 48 ora, mamoy ny ainy eny amin’ny arabe vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Io antontanisa io no nanosika ny sehatra tsy miankina hanampy ny mpampiasa lalana indrindra ny mpitondra fiarakadia sy moto ho tomponandraikitra sy olom-pirenena mahafantatra sy manaja ny lalàn’ny fifamoivoizana hampivoatra ny fifamoivoizana sy hisorohana ny loza samihafa. 28 000 ny boky natonta, ny 5 000 amin’ireo hozaraina maimaipoana isaky ny kaominina, zandary, polisy mba ho maro ny mahalala azy. Azo vidiana koa ny boky ho an’ireo mpampiasa lalana rehetra.
Tsy mbola manana lalàna mifehy ny fifamoivoizana i Madagasikara hatramin’izao fa ordonnance sur la circulation routière nivoaka ny taona 1962 no ampiasaina hatramin’izao. Efa eo an-dalam-pamolavolana ny lalàn’ny fifamoivoizana, taona 2017, ny teknisianina fa mbola miandry dingana maro vao tena hampiharina izany. Tsy nanao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fifamoivoizana tany Vienne koa isika ka mety hisy fiantraikany amin’ny fanekena ny taratasy fahazoana mitondra fiara malagasy ho an’ireo hiasa any ivelany izany.